‘लङ कोभिड’का लक्षण के हुन्, कति महिनासम्म हुनसक्छ ? « Mero LifeStyle
‘लङ कोभिड’का लक्षण के हुन्, कति महिनासम्म हुनसक्छ ?
अनुपम भट्टराई	||6June, 2021
कोरोनाबाट निको भएको ६ हप्तापछि पनि केही मानिसमा थकाई लाग्ने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र गन्ध नआउने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या निरन्तर देखिएका छन् । यसमध्ये अधिकांशले थकान महशुस गरेको बताएका छन् भने केहीलाई मानसिक समस्याले पनि सताएको छ ।
जसकारण मेडिकल अनुसन्धानकर्तामा यसले चासो थपेको छ । त्यसो त विज्ञहरु अहिले यो लक्षणले आखिर कति समयसम्म असर गरिरहन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरिरहेका छन् ।
लण्डनकी एलिसा पेरेगोले गत वर्ष कोभिड–१९ भाइरसको सुरुवाती इन्फेक्शनबाट निको भएपछि पनि कायम रहेको लक्षणलाई पहिलोपटक लङ कोभिड शब्दको प्रयोग गरेकी थिइन् ।
मेडिकल रिसर्चसँग जोडिएको यो समस्यालाई लङ कोभिड भनिएको छ । यो के हो, यसका लक्षण के हुन्, र यसबाट कसरी बच्ने ? यस बारेमा हामीले टेकु अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन र थोङ्ची मेडिकल कलेज वुहानका कन्सलटेन्ट फिजिसियन डा. रमेश आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
लण्डनकी एलिसा पेरेगोले गत वर्ष कोभिड–१९ भाइरसको सुरुवाती इन्फेक्शनबाट निको भएपछि पनि कायम रहेको लक्षणलाई पहिलोपटक लङ कोभिड शब्दको प्रयोग गरेकी थिइन् । यी लक्षण केही हप्ता वा महिनासम्म पनि रहन्छन् । अर्थात् शरीरबाट भाइरस निस्किए पनि त्यसका लक्षण नष्ट हुँदैनन् । केही लक्षण रहिरहन्छन् भने केही लक्षण केही दिनमा फेरि देखिन्छन् ।
कोरोनाको मारमा निजी स्कूल : ‘कुनै बन्द भए, कसैलाई भाडा तिर्न धौ–धौ’
अधिकांश संक्रमितमा कोभिड–१९ पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आउनुलाई माइक्रोबायोलोजिकल रुपमा शरीरले रिकभर गरेको भनिने डा. पुन बताउँछन् । तर क्लिनिकल लक्षण नष्ट भइसकेका हुँदैनन् । यसै आधारमा लङ कोभिड शरीरमा भाइरस देखिएको समयदेखि लक्षण नष्ट हुन लाग्ने समयावधिलाई भन्न सकिने उनको भनाई छ ।
यस्ता हुन्छन्, लङ कोभिडका लक्षण :
– मुटुको धड्कन रोकिएको जस्तो हुने
– ज्यान भारी भए जस्तो अनुभव हुने
– श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने
– छाती दुख्ने
– लामो समयसम्म जोर्नीहरुको दुखाइ भइरहने
– स्मरण शक्तिमा समस्या आउने
– मांसापेशी दुखिरहने
– एन्जाइटी र डिप्रेशन
– अक्सिजन घटिरहने
यसका साथै, कतिपयको ब्रेन स्ट्रोक भएर पनि मृत्यु भइरहेको छ । त्यस्तै कतिपयलाई प्यारालाइसिस, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स भएको पाइएको डा. आचार्यले बताए ।
इटालीको अस्पतालमा भर्ना भएका १ सय ४३ जनामा गरिएको एक अध्ययनमा ८७.४ प्रतिशत संक्रमितले लङ कोभिडका लक्षण भएको बताएका थिए । थकान अधिकांशको समस्या थियो । साथै, खोकी, छाला रोतो हुने, टाउको दुख्ने, पखालाजस्ता लक्षण देखिएका बताए ।
‘त्यसैले यस्ता लक्षण लामो समयसम्म रहिराखेको अवस्थामा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ, आचार्य भन्छन्, ‘जसले अन्य रोगको जोखिम पनि बढाउँछ । जस्तै सुगर नभएको बिरामीलाई सुगर जीवनभर हुनसक्छ ।’
लङ कोभिडका २ स्टेज हुने डा. पुन बताउँछन् । ‘एउटा पोस्ट एक्यूट कोभिड र अर्को क्रोनिक स्टेज,’ डा. पुन भन्छन्, ‘यसले मानसिकदेखि मुटुसम्मको समस्या हुनसक्छ ।’
एउटा मात्र भएपनि रुख रोपौं
– जसलाई जुन समस्या छ त्यहीसँग सम्बन्धित चिकित्सिकसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।
– कोरोना संक्रमितले एक वर्षको लामो समयसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ ।
– आफ्नो आत्मबल बढाउने र सकारात्मक सोच बनाइराख्ने ।
– संक्रमणमुक्त भएपछि लक्षणहरु देखिए परीक्षण गराउने र चिकित्सकको सल्लाह लिने ।
– दैनिक ४० मिनेट घाममा बस्ने
– नियमित अण्डा, दूध, माछामासु, हरिया सागसब्जी खाने
– नागरिकहरु कोरोना मुक्त भयो वा भ्याक्सिन लाइसकेँ भनेर जथाभावी बाहिर ननिस्कने ।
कस्तालाई हुन्छ ‘लङ कोभिड’ ?
लङ कोभिड सबै किसिमका बिरामीलाई हुनसक्ने डा. पुन बताउँछन् । ‘यो हल्का, मध्यम र गम्भीर लक्षण भएका संक्रमित सबैलाई हुनसक्छ तर अधिकांश केस भने गम्भीर लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई भएको छ,’ उनले भने ।
अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनको एक रिपोर्टमा ३ हजार १ सय ७१ कोभिड संक्रमितमा गरिएको अध्ययनमा ६९ प्रतिशतलाई ६ महिनामा एक वा त्यो भन्दा धेरै चिकित्सक कहाँ जानुपरेको थियो ।
नेपालमा लङ कोभिडको समस्या धेरैमा देखिएको डा. पुन बताउँछन् । ‘नेपालमा पनि यस्ता धेरै केस देखेको छु, उनले भने, ‘अहिले यसको समस्या धेरै युवावर्गमा देखिएको छ, वृद्धहरुमा पनि समस्या छ तर, उहाँहरु अस्पताल नआउनुभएको पनि हुन सक्छ ।
‘हुनेले दिएर जाऔँ, नहुनेले लिएर जाऔँ’ « Mero LifeStyle
काठमाडौं उपत्यकामा कतिले गरे नियम उल्लंघन, कतिलाई भयो कारबाही ? « Mero LifeStyle
शारीरिक अशक्तता भएका परिवारमा रोगभन्दा भोकको चिन्ता « Mero LifeStyle